. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒ
ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်နေလဲ ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်မေးတော့လည်း ဟိုလိုလိုဒီလိုလို .. ခုဒါဖြစ်ချင်နေရင်တောင် ခဏနေ တမျိုးပြောင်းပြန်ရော .. အပြောင်းအလဲမများပါဘူး နှစ်ခုထဲပါ .. ခုတမျိုးတော်ကြာတမျိုး .. (ကော့မင့်ပေးသွားတာပြန်ရေးပြတာ :D)
အဟုတ်ပဲ .. စိတ်က ခုထိကို မတည်ငြိမ်သေးဘူးပြောမလား .. ငြိမ်ချင်တဲ့နေရာလည်း ငြိမ်နေပြန်ရော .. ခက်တော့နေပါဘီ :P (ဆေးတော့ လှုပ်သောက်ဖို့လိုနေပြီ ..)
ခုဘာဖြစ်ချင်လဲမေးလာရင် ဘာမှမဖြစ်ချင်သလိုပဲ .. တကယ်ဘာမှဖြစ်ချင်စိတ်မရှိဘူးလားဆိုလာပြန်ရင်လည်း မဟုတ်သေးပြန်ဘူး .. လုပ်ချင်တာတွေ ဖြစ်ချင်တာတွေ များမှများ .. သွားပြီ .. တခုခုတော့ လွဲနေဘီ .. ???
ဒီနေ့မနက် အိပ်ရာက ထထချင်း ဘာဖြစ်ချင်လဲလို့မေးလာရင်တော့ ရုံးမသွားချင်ဘူး .. :D .. မိုးအေးတယ်လေ အိပ်ချင်တာ ..
တပတ်ကို အလုပ်က ၃ရက်လောက်ပဲတက်ရတဲ့အလုပ် (လခလည်းကောင်းကောင်းပေါ့နော်) ရရင်ကောင်းမယ် .. အလုပ်သာမလုပ်ချင်တာ .. လောဘက အဲလိုကြီးသေးတယ် ..
ငယ်ငယ်ကတော့ ပိုက်ဆံမရှာနိုင်သေးခင်ကဆို ပိုက်ဆံတွေရှာချင်တယ်ပေါ့ .. မိဘတွေနဲ့ တူတူနေတုန်းက မနေချင်ဘူး .. တယောက်တည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်ပြန်ရော .. ခုဘာပဲပြောပြော နဲနဲပါးပါး ပိုက်ဆံရှာနိုင်သလိုလိုဖြစ်လာပြန်တော့ မရှာချင်တော့ဘူး .. မိဘအိမ်မှာပဲ အေးဆေးနေချင်တော့တယ် .. အဲ .. တကယ်လို့ အဲလိုမျိုးပြန်နေရကြည့် .. နေချင်ပြန်ဦးမယ်မထင် .. ခက်ပါလားနော် .. ကိုယ့်ဟာကိုတောင် မသိတော့ဘူး ..
စိတ်ဆိုတာလည်း အချိန်ပြည့်ပြောင်းလဲနေတော့တာပါလား .. အဖြစ်ချင်ဆုံး ဆန္ဒရယ်လို့တော့ ခုနေမရှိသေးဘူး .. ဖြစ်ချင်နေတဲ့ ဆန္ဒလေးတွေတော့ မွစိမွစိလေးတွေ အများကြီးပဲ .. အဲဒါတွေ ဖြစ်သွားပြီးပြီ ရသွားပြီးပြန်ပြီဆိုလည်း မလိုချင်တော့တာ နောက်ထပ်ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ ပေါ်လာလိမ့်ဦးမှာပဲ ..
မိုးခါးက စိတ်ညစ်မခံချင်ဘူး .. ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာပဲနေချင်တယ် .. သွားချင်စိတ်ရှိရင်သွားလိုက်မယ် .. လုပ်ချင်စိတ်ရှိရင်လုပ်လိုက်မယ် .. လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်တယ် .. ဒါတွေက ဆန္ဒတွေလို့သတ်မှတ်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ် ..
ရန်ကုန်ပြန်ချင်တဲ့အချိန် ပြန်လိုက် .. မနေချင်တော့ရင်ပြန်လာလိုက် .. စိတ်ကူးထဲမှာတော့ ဟုတ်နေရောပဲ .. တကယ်တော့ မနေနိုင်သေးဘူးလေ .. ဒီမှာလည်းမနေချင်ပြန် .. နေလို့ဖြစ်ပေမယ့် ပျော်လားဆို မပျော်ဘူးလေ .. တော်တော်များများလည်း ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် .. သူများလက်အောက်နေရတာ သူတို့မျက်နှာကြည့်နေရတာ ဘယ်သူနေချင်မလဲနော် .. ဒါပေမယ့်လည်း နေနေကြရပြန်တယ် .. ဒီကြားထဲမှာပဲကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ပျော်အောင်ထား ရှင်းအောင်ထား .. နေရတာပဲ ..
အိမ်ကိုဖုန်းဆက်တိုင်း မေကြီးနဲ့ဖေကြီးကမေးတယ် .. သမီး ပျော်ရဲ့လားတဲ့ .. အဲလိုအခါမျိုးဆို ပြန်ဖြေမိတယ် .. စိတ်ဆင်းရဲစရာတော့မရှိပါဘူးလို့ .. စိတ်တော့ဆင်းရဲနေတာမျိုးတော့မရှိပေမယ့် ပျော်လည်းမပျော်ဘူးလေ .. ရှုပ်လိုက်တာနော် .. ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် ရေးရင်းလည်ထွက်နေပြီ ..
လူ့ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုလေးပါ .. ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲ ဖြတ်သန်းသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပဲ .. ဘ၀တလျှောက်လုံး အထူးတလည် စိတ်ညစ်စရာမျိုးမရှိခဲ့သလို ကြီးလာရင် ဘာဖြစ်ရမယ် ညာဖြစ်ရမယ်လို့လည်း ရည်မှန်းချက်ကမရှိခဲ့ဘူး .. (ရေးရင်း ပေါ်ကုန်ပြီ ၀ီရိယတွေ :P ကြီးပွားဦးမယ် .. :D)
ကိုယ် ချစ်ခင်တဲ့သူတွေနဲ့ ဘ၀တလျှောက်လုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ ရောဂါဘယကင်းကင်းနေချင်တယ် .. စိတ်ချမ်းသာရာလေးတွေ လုပ်ချင်တယ် .. မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကို လင်းလင်းထင်းထင်းမြင်ချင်တယ် .. လူတွေမျက်နှာ ပြုံးနေတာပဲမြင်ချင်တယ် .. မီးမှန်ချင်တယ် .. :P .. အင်တာနက် လိုင်းကောင်းစေချင်တယ် .. ဖိုးဂျယ်ခမျာလဲ အွန်လိုင်းတက်တိုင်း မေတ္တာပို့သံတွေချည်း ကြားနေရတယ် .. :P
လူတွေအချင်းချင်း ကတုံးပေါ်ထိပ်ကွက်လုပ်နေတာတွေ .. မတရားလုပ်နေတာတွေ .. လိမ်ညာကောက်ကျစ်နေတာတွေ .. သူများနှာခေါင်းပေါက်နဲ့အသက်ရှုနေတာတွေ မြင်ချင် မကြားချင်ဘူး .. (ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားတော့မသိဘူး :D)
စာတွေဖတ်ရတဲ့အထဲမှာရော တရားတွေထဲမှာရော .. ကမ္ဘာကြီးက ဆုတ်ကပ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ လူတွေသက်တမ်းတွေတိုလာရတဲ့အထဲ ဒီသက်တမ်းတိုတိုလေးမှာကို တယောက်ကိုတယောက် မေတ္တာမထားနိုင်ကြတာ တော်တော်ဆိုးပါတယ် .. အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားသင့်တယ်ထင်ပါတယ် .. ပြည့်ဝသူတယောက်ဖြစ်ဖို့တော့ မလွယ်နိုင်ဘူးလေ .. လောကီသားတွေဆိုတော့ .. ကိုယ့်လုပ်ရပ်ပေါ်ကို တရားလားမတရားလား အမှန်အတိုင်းမြင်သင့်တယ် .. ကိုယ့်လုပ်မယ့်အလုပ်တိုင်းကိုလည်း မေတ္တာတရားရှေ့ထားလုပ်သင့်တယ် .. တချို့လည်းရှိပါတယ် .. ကိုယ့်စေတနာနဲ့မထိုက်တန်သူတွေ .. ဒါကသူ့အပိုင်း .. ကိုယ့်လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်သွားရုံ လို့ပဲထင်ပါတယ် ..
ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတွေကတော့ အဲဒါပါပဲ .. သိပ်ထွေထွေထူးထူးမဟုတ်ပေမယ့် နဲနဲလည်းခက်ခဲပါတယ် .. ငှက်ကလေးရေ .. ရေးလိုက်ပြီနော် .. နောက်ကျတာ စိတ်မဆိုးကြေးး)) .. ကျေနပ်မယ်ထင်ပါတယ် ..
ခုတလောလည်း စာရေးဖို့ စိတ်ထဲသိပ်မရောက်ဘူးဖြစ်နေပါတယ် .. အလုပ်မှာလူမလစ်တော့လည်း သတိလေးကပ်ပြီး ဘလော့လည်ရပါတယ် .. သမာဓိတော့ကောင်းလာဘီ :P .. နောက်ကျောမလုံပါ .. ဒီအိမ်ရှင် ဧည့်ဝတ်မကျေဖြစ်နေတာကို ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ ..း)) တခါတလေသွားလည်ပြီး ကောမန့်ရေးဖို့ ဖွင့်တုန်း လူလာရင်လည်းပိတ်လိုက်ရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် .. အိမ်မလည်လို့ဆိုပြီး စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့နော် ..
ရေးသားသူ moekhar at 6/25/2009 12:31:00 PM